सभामुखद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्री सहभागी होलान् ? – Hamrosarokar
सभामुखद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्री सहभागी होलान् ?
By Hamrosarokar	 On २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०९:४४
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा
काठमाडौं, २८ जेठ–सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।
उनले राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । उनले शुक्रबार २ बजे छलफलका लागि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाएका छन् ।
छलफलमा सहभागिताका लागि दलका प्रमुख नेताहरूलाई सभामुखले पत्र पठाएका थिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए थिए ।
“प्रधानमन्त्रीको नाममा पार्टी कार्यालयमा पत्र पुगेको रहेछ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार हो,” सचिवालयका ती सदस्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउने त्यसरी होइन । भेटेर छलफल गर्ने हो । यसरी बोलाएको बैठकमा उहाँ जानु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि छ ।”
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्दा पनि पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पत्र पठाएको पाइएको भन्दै सचिवालयका ती सदस्य भन्छन्, “पार्टी कार्यालयमा पठाएको पत्र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले सबै कार्य विधि र प्रक्रिया अनुसार हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत हुँदाहुँदै प्रक्रिया–पद्धति मिचेर संसद् विघटन गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर अदालत पुगेको छ । मुद्दामाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । सभामुख जारी संवैधानिक र राजनीतिक संकटको समाधान के हुन्छ भनेर छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
शीतलनिवासको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय…
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक
सप्तकोशीको खुवालुङ्ग ढुङ्गो संरक्षण गर्दै पर्यटकीयस्थल बनाउने प्रदेश सरकारको घोषणा